General fampidirana - China Ningbo Ruking elektrika
Lamina nanapaka Plotter
Lamina nanapaka plotte
Manjaitra Template Cutting Machine
Lamba Cutting Plotter Machine
Dokam-barotra & fonosana Industry Cutting Machine
Double Head System Auto Cutting
Advertising nomerika fanapahana plotter
Apparel fanapahana plotter
Auto-anatiny fanapahana plotter
Furniture nomerika cutter
Hafanàm-po an kitapo hoditra cutter
Fonosana fanapahana plotter
Ningbo RUK Technology Co., Ltd. dia avo-teknolojia orinasa manao Industrial automatique system, fitaovana sy mifandray piesy, ary koa ny hametraka ny fandaharana feno ny R & D, orinasa mpamokatra entana, sy ny asa fanompoana ny varotra amin'ny ankapobeny.
Izahay manana ekipa matihanina Nizara ny mahay sy ny olona tsy mivadika, izay mihazona lahatsoratra manan-danja iray ao amin'ny dept tsirairay, milina, elektronika, solosaina rindrambaiko sy ny fitantanana. Koa isika fiaraha-miasa amin'ny fandaharan'asa ny R & D amin'ny fantatrareo tsara amin'ny oniversite ao an-toerana sy avy any ivelany, indrindra any Eoropa nitondra ny teknolojia sy ny manam-pahaizana. Isika tsy miankina fikarohana sy lasa CAD / CAM tafiditra NC fanapahana rafitra, ary koa ny maso sady nandroaka nanontany any an-tsaha automatique. Products dia be ampiharina amin'ny orinasa maro toy ny hoditra, kiraro, akanjo, kitapo, fonosana, plastika malefaka ara-nofo, iombonana amin'ny fitaovana, milina sy ny fitaovana elektronika. Tanteraka isika manatanteraka ISO9001 fitantanana tsara rafitra, ary efa nahazo taratasy fanamarinana ny fahefana ao an-toerana sy ampitan-dranomasina.
RUK teknolojia realism saina foana toy ny orinasa sy ny fanavaozana ny fanahy, fo manontolo toy ny fanompoana ho torontoronina. Isika matoky tanteraka ny hahazo ny fiderana sy ny matoky amin'ny alalan'ny toetra tsara, tso-po, ary ho zava-dehibe ny fanompoana ny mpanjifa ambanin'ny Nifanesy koa ny ezaka.
Post fotoana: Mar-06-2018
RUK-tsaina foana ny teknolojia sy ny inno realism ...